Ogaden News Agency (ONA) – Wadanka Itoobiya (Ethiopia) oo galay Kaalinta 2aad ee wadamada Aduunka ugu Saboolsan
Wadanka Itoobiya (Ethiopia) oo galay Kaalinta 2aad ee wadamada Aduunka ugu Saboolsan
Wadanka Itoobiya ayaa galay kaalinta labaad ee wadamada Aduunka ugu Faqiirsan, midaas oo aad looga yaabay kadib markii taliska Woyanaha Ethiopia uu caalamka u sheegay in wadankoodu uu horumar sameeyay dhaqaale (double Digit) horumarkaas oo ah midka ugu heersareeya ee wadamada soo koraya sameeyaan.
Hadaba sheegasada taliska Woyanaha iyo xaqiiqda ka jirta dhulka Ethiopia ayaa ah kaaf iyo kala dheeri kadib markii lasoo saaray wareegtadii xaqiiqada aheyd ee lagu cabirayay saboolnidamada Aduunka. Warbixintaas oo lagu shaaciyay in wadanka Ethiopia ku jiro kaalinta 2aad ee wadamada aduunka ugu saboolsan.
Waxaana cajiib noqotay oo kale in 10ka wadan ee adduunka ugu saboolsan ay noqdeen dhamaantood wadamo kamid ah Afrika, wadanka Somalia oo dowlad ka jirin muddo labaatansano ka badan ayaa gashay kaalinta 6aad ee wadamada Aduunka ugu saboolsan.
Wadanka Ethiopia waxa ay saboolnimada ku xigta oo ka hooseysa iyada oo kaalinta kowaad ee saboolnimada aduunka gashay wadanka Niger oo ah wadan dhulkiisu 80% uu yahay dhul saxara ah oo lama daggaana (Sahara Desert).
Kaalinta labaad waa wadanka Ethiopia oo caalamka u sheegtay innuu yahay wadan horumarkiisu si xowli ah ku socdo.
Hadaba waxaa aduunka haayadaha u qaabilsan qiimeynta Horumarka iyo saboolnimada aduunku ay ka doodayaan been abuurashada wadanka Ethiopia ee ay ku sheegatay in dhulka Ethiopia dhaqaalihiisu kor u kacay (Double Digit).
beenta intaas le’eg ayaa aad looga yaabanyahay iyo qaabka ay Ethiopia u xisaabtanto.
Shacabweynaha Ogadeniya ayaa horey ula yaabana wadanka Ethiopia marka ay sheegaan in horumar ka jiro dhulka Ogadeniya. iyaga oo hal ceel oo adeeg xitaa u sameyn bulshada oo meel laga qotomiyo ku sheegta horumar inta ay sawiro kasoo qaadaan.
Horumarka ay Ogadeniya ka sheegto ee been abuurka ah ayay isku dayday in caalamkana ay ku mala awaasho. Ethiopia wa wadanka mucaawamada dhaqaale ugu badan caalamka hesha ee Aid- ka looyaqaano. Nolosha Ethiopia oo idil waxa uu ku tiirsanyahay baryootan iyo baahi aduunweynuhu kolba usoo arruuriyo hadana waxay sheeganayaan horumar xad dhaaf ah.